Codsiyada ugufiican ee wicitaanada fiidiyowga ee bilaashka ah looga sameeyo Android | Androidsis
Barnaamijyada ugufiican ee lagu sameeyo wicitaanada fiidiyowga ee bilaashka ah ee Android
Haaruun Rivas | 26/07/2021 00:20 | Codsiyada Android, Aaladaha Android
Wadahadalka fiidiyowga ama wicitaanka fiidiyowga waa mid ka mid ah noocyada isgaarsiineed ee ugu badan maanta. Waxay wax badan naga badbaadineysaa inaan qorno waxayna fududeeysaa muujinta shucuurta, ujeedooyinka iyo dareenka, iyadoo awood u leh inaan kaga dhex hadalno shaashadda waqtiga dhabta ah iyadoo la adeegsanayo kamaradda moobiilka oo aan lagu qorin qaab qoraal ah.
Waxaa jira dad badan Barnaamijyada Android ee bixiya muuqaalada sheekaysiga fiidiyowga, iyo qaar ka mid ah kuwa ugu fiican ayaa ah kuwa aan kaga hadlayno qoraalkan uruurinta, si aad u hesho midka aad ugu jeceshahay oo aad bilowdo fiidiyoow aad ugu yeerto asxaabtaada, qoyskaaga, asxaabtaada iyo dadka aad taqaan.
Hoos waxaad ka heli doontaa taxane ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee lagu sheekaysto fiidiyowga ee casriga ah ee Android. Waxaa xusid mudan, sida had iyo jeer aan yeelno, taas dhammaan kuwa aad ka heli doontid qoraalkan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood.
Si kastaba ha noqotee, hal ama in ka badan ayaa laga yaabaa inay leeyihiin nidaam lacag-bixin gudaha ah, oo u oggolaanaya helitaanka astaamaha qiimaha leh iyo helitaanka astaamo badan, iyo waxyaabo kale. Sidoo kale, looma baahna in wax lacag ah la bixiyo, waxaa mudan in lagu celiyo. Waxa kale ee jira ayaa ah in barnaamijyada badan ee aad ka heli doontid halkan ay sidoo kale leeyihiin fariimo deg deg ah oo fariimo ah iyo / ama ay leeyihiin tayo isku xirnaanta bulshada, sidaa darteed in kabadan hal ayaa lagugu ogaan doonaa. Hadda haa, aan u nimaadno.
2 Kulamada Cloud ee ZOOM
4 JusTalk - wicitaan fiidiyow oo bilaash ah
5 Facebook Rasuulka
Waxay noqon doontaa qalad in aan la bilaabin qoraalkan uruurinta ee barnaamijyada ku sheekaysiga fiidiyowga ugu fiican Skype, oo laga yaabo inuu yahay barnaamijka ugu caansan ee wicitaanada fiidiyowga ah iyo mid ka mid ah xulashooyinka ugu horreeya ee maanta loogu talagalay.
Skype waa mid ka mid ah aaladaha casriga ah ee loogu sheekeysto fiidiyaha iyo barnaamijyada adduunka loogu isticmaalo mobilada Android, waana sababtaas Waxay leedahay wax ka badan 1,000 milyan (1 bilyan) oo laga soo dejinayo Play Store. Waad wici kartaa fiidiyow saaxiibkaa, inkasta oo aad sidoo kale sameyn karto kooxo ka kooban 24 xubnood. Ugu fiican? In ay ku jiraan qeexitaan sare, wax aan dhamaan barnaamijyada nuucaan ahi bixin karin, waxaa xusid mudan.
Dabcan, Skype waxaad sidoo kale warqad ugu qori kartaa xiriiradaada iyo qofkastoo aad rabto Farriimaha SMS-ka ee ku socda adduunka oo dhan, mid ka mid ah astaamaha ugu shaqada badan ee ay leedahay. Waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa sidii barnaamij fariin deg deg ah, maxaa yeelay wuxuu leeyahay sheekooyin nooc kasta leh, emojis, GIFs iyo xulashooyin fara badan si aad u habeysid astaantaada oo aad u dirto farriimo wata sawirro iyo fiidiyowyo. Haddii aadan rabin inaad wax qorto, waxaad sidoo kale wici kartaa qof cod si fudud oo aan xad lahayn.
Dhinaca kale, Skype waxay leedahay qaab dhexdhexaad ah oo nadiif ah oo si fudud loo isticmaali karo. Tan kale ayaa ah inaad abuuri karto koonto gudahood ilbidhiqsiyo gudahood, adigoon buuxinayn goobo badan, oo aad isticmaali karto wakhti kasta. Waxay ku habboon tahay fiidiyaha la sheekaysiga dadka adduunka oo dhan.
ZOOM wuxuu noqon karaa mid ka mid ah seddexda ama shanta barnaamij ee ugu wanaagsan ee wicitaanka fiidiyaha loogu talagalay Android. Codsigan ayaa ah mid kale oo si aad ah looga jecel yahay adduunka oo dhan, in ka badan 500 milyan oo soo degsasho ah oo caddeeya.
Waana in barnaamijkani sidoo kale leeyahay wada sheekeysi fiidiyow oo qeexan, laakiin wax ka duwan kuwa ugu badan ayaa ah inay taageerto tiro aad u tiro badan oo isticmaaleyaal ah oo ku jira wadahadal fiidiyoow ah, oo leh ilaa 100 kaqeybgalayaal. Haddii aad iibsato nooca lacag bixinta ah, illaa 1,000 qof ayaa heli kara isla wicitaanka fiidiyowga.
Dabcan, waxaa jira ilaa 100 kaqeybgalayaal ay qirato oo kaliya ilaa 40 daqiiqo; tan, haddii aadan iibsan wax qorshe ah oo ka socda barxadda. Haddii aad rabto waqti dheeri ah oo dheeri ah iyo shaqooyin horumarsan, waad bixin kartaa qorshooyinka ka socda 15 euro ilaa 20 euro bishii.
Halkan waxaa habboon in la sheego in dadka isticmaala caadiga ah ay ka fiican tahay in la isticmaalo nooca bilaashka ah ama midka ugu jaban. Kuwa ugu qaalisan waxaa loogu talagalay gaar ahaan shirkadaha yaryar iyo kuwa waaweyn, iyo sidoo kale qolalka shirarka, ardayda iyo kooxaha shaqooyinka waaweyn.
Waxyaabaha kale ee ay leedahay 'ZOOM' waa inay u oggolaato isku xirnaanta iyo isku-dhafidda koox wicitaannada fiidiyowga ah inay fududaan karaan. Kuwani waxay ku noqon karaan xiriiro ama casuumaado email iyo wax ka badan.
Dhinaca kale, ZOOM sidoo kale waxay leedahay con qeyb fariin deg deg ah oo aad ugu diri karto fariimaha qoraalka, sawirada, fiidiyowyada iyo feylasha, iyo sidoo kale emojis iyo waxyaabo kale. Isla mar ahaantaana, sida Skype, waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameyso wicitaanno cod ah, haddii ay dhacdo waqti aad rabto inaad ka booddo wicitaannada fiidiyowga oo aadan u isticmaalin kamaradda si aad ula hadasho qof. Taa baddalkeeda, waxaad marin ka heli kartaa wadiiqooyinka wada sheekaysiga dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, si aad ula macaamisho hal ama dad ka badan oo aad ugu xirnaato markasta.
Google Duo waa barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyada lagu sheekeysto fiidiyowga ee leh shaqooyin badan oo lagu fulinayo. Waxay ku siisaa tayo muuqaal aad u wanaagsan wicitaanada fiidiyowga, iyadoo ku jirta HD. Maxaa intaa ka badan, waxay u ogolaataa wicitaanada kooxda ilaa 32 xubnood, oo ka dhigaysa mid ku habboon kooxaha ardayda, kooxaha shaqada, fasallada, iyo inbadan. Isla mar ahaantaana, waa wax aad u fudud in la isticmaalo oo ay interface waa arrin saaxiibtinimo.
Sida labadii barnaamij ee hore oo horeba loo sharraxay, Google Duo waxay u oggolaaneysaa fariin deg deg ah, oo aad ku dhex mari karto shakhsiyeeyo farriimahaaga fiidiyooga oo leh saameyn xiiso leh oo aad wadaagto fariimaha codka, sawirrada, qoraalada iyo emojis. Waxaad sidoo kale xoqin kartaa oo sawiri kartaa wicitaanadaada fiidiyowga ah ama aad codsan kartaa wejiyadaha qosolka leh si aad ula qosasho kuwa aad taqaanno, asxaabtaada iyo qoyskaaga.
Wax aad u xiiso badan oo Google Duo leeyahay ayaa leh hab iftiin yar, taas oo, sida magaceeda ka muuqata, aad ku sheekaysan karto fiidiyoow meelaha aanad haysan iftiin kugu filan oo aad si muuqata isugu arki karto. Muuqaalkan firfircoon, wicitaanka fiidiyowga ee mugdiga ayaa hagaagaya.
Dhinaca kale, waxay kuu ogolaaneysaa inaad la sameysatid wicitaanada codka asxaabtaada isla markaana aad sawiro kaga qaadatid wicitaanada fiidiyowga si fudud oo dhaqso leh si aad uqabsatid daqiiqado aan lagaran karin. Dabcan, waa inaad lahaataa cinwaan emayl Google ah (Gmail) si aad u awoodo inaad isticmaasho Google Duo oo aad uga faa'iideysato dhammaan faa'iidooyinkiisa.
JusTalk - wicitaan fiidiyow oo bilaash ah
Beddel aad u wanaagsan oo lagu sameeyo wadahadal fiidiyow oo bilaash ah, wicitaano fiidiyoow kooxeed iyo wicitaanno cod ah oo lala yeesho asxaabtaada, kuwa aad jeceshahay, asxaabtaada iyo dadka aad taqaanaba waa JusTalk. Barnaamijkan ayaa ogolaanaya dir oo hel sawirada, codadka, fiidiyowyada, goobta, istiikarada, GIF-yada iyo inbadan oo lagu sheekaysanayo hal qof ama koox koox. Dabcan, takhasuskiisa wuxuu diiradda saarey sameynta sheekaysiga fiidiyowga, dabcan.
Wicitaanada fiidiyowga waxaa lagu sameyn karaa hal qof oo keliya ama illaa 50. Isla mar ahaantaana, waxaad uga dhigi kartaa iyaga madadaalo leh sawirada, istiikarada, sawirrada iyo fiidiyowyada la heli karo, kuwanna waxay ku jiraan xallinta HD iyo cod si caddaalad ah u cad oo u oggolaanaya isgaarsiintu inay kaamil noqoto.
Dhinaca kale, JusTalk waxay la timaaddaa hab mugdi ah oo aad ku dhaqaajinkarto muddo ilbiriqsiyo ah adoo u maraya dejimaha barnaamijka, sidaa darteed xaaladaha iftiinka hooseeya isdhexgalkaagu kuma dhibayo oo indhahaaga wuu ku daalayaa. Tan ka sokow, wicitaanada, farriimaha iyo wicitaannada fiidiyowga waa la duubay, sidaa darteed amniga iyo asturnaanta marwalba waa la ilaaliyaa.
Barnaamijkan wuxuu horeyba ugu faanaa in kabadan 10 milyan oo soo degsasho ah Google Play Store wuxuuna leeyahay 4.2 xiddig qiimeyn ah dukaanka, taas oo ku saleysan kudhowaad 300 oo u badan faallooyin wanaagsan.
Si loo dhammeeyo qoraalkan isku-darka ah ee codsiyada ugu fiican ee fiidiyowga lagu sheekeysto ee loogu talagalay Android, waxaan u keenaynaa Facebook Messenger, mid aan markii hore bixinaynin waxqabadka wicitaannada fiidiyowga, laakiin hadda waxaa loo taagay inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan adeegsadayaasha dhammaan adduunku inuu la xiriiro.
Facebook Messenger waxaa loo diyaariyey inta badan isgaarsiinta iyadoo loo marayo fariimaha deg dega ah. Waa dhammaystirka barnaamijka rasmiga ah ee Facebook ee loogu talagalay Android oo way ka sii ballaadhaysaa hawlaha ay codsi kasta oo kale oo fariimaha degdegga ahi ku deeqi karaan. Tanna waxaad ku arki kartaa sheekooyinka ama xaaladda asxaabtaada lagu daray shabakadda bulshada, waad uga jawaabi kartaa iyaga, waxaad adeegsan kartaa emojis, sumadaha, GIF-yada waxaadna u habeyn kartaa falcelinta farriimaha, iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad aragto macluumaadka cinwaanka Facebook ee xiriirada, codsato naanaysta, isku xir mawduucyada, fur wadahadal qarsoodi ah oo ku saabsan asturnaanta weyn iyo amniga farriimaha ku jira iyo in ka badan. Isla mar ahaantaana, kuma bixiyo qaabka mugdiga ah oo waxay leedahay qayb ka mid ah beddelka avatar, qaabeynta ogeysiisyada iyo dhawaaqyada, keydinta xogta, u dirto farriimaha qoraalka (SMS) isla markaana abuuraan goobooyin lagu sheekeysto.
Wicitaanada fiidiyowga ah ee aad ku sameyn karto Facebook Messenger waxay u oggolaaneysaa ilaa 50 qof inay isku xirmaan, inkasta oo aan dhammaantood la wada arki doonin waqti isku mid ah, si macquul ah. Xallinta kuwani waxay ku jiraan qeexitaan sare, sida maqalka oo kale, markaa khibradda sheekaysiga fiidiyowga waa mid hagaagsan oo ka mid ah sababaha barnaamijkani ugu jiro liistadan.
Ugu dambeyntiina, codsigan wuxuu leeyahay wax ka badan 5 bilyan (5 bilyan) oo laga soo dejiyay Play Store, isagoo ah kan ugu badan ee loo isticmaalo qoraalkan isku-darka ah marka la eego guud ahaan, in kasta oo uusan ahayn ikhtiyaarka ugu horreeya ee lagu sameeyo sheeko fiidiyoow ah, waxaa xusid mudan
Rasuulka: fariimaha bilaashka ah iyo wicitaanada fiidiyowga
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada ugufiican ee lagu sameeyo wicitaanada fiidiyowga ee bilaashka ah ee Android
Beddelka ugu fiican ee Fintonic ee Android